Qeerroon Nii Fincila Malee Gaaffii Hin Gaafatu – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooQeerroon Nii Fincila Malee Gaaffii Hin Gaafatu
Qeerroon Bilisummaa Oromoo Mootummaa Gabroomfataa Nii Fincila Malee Gaaffii Hin Gaafatu.
Caamsaa 23, 2020
Jaarmayaan Qeerroo Bilisummaa Oromoo taliiga ofii qindoomina waloo WBO faana tolfachuun kufaatii mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo mudatee rakkoo dhaluun warraaqsa gatiin dhiigaafi lafeen itti kafalame daddaaqaa ture mara caccabsuun caasaa ofii gad’ dhaabee qabsoo hidhannoo tumsuun warraaqsa fakkaattotaafi Xawalwaallotaan laamshahe wal’aanee dhidhiibee bakkatti deebisuun waaroo salphinaa ummata Oromootti dhufe ciree daandii warraaqsaas qulqulleessee tarkaanfachuutti jira. Haatahu malee, Murni maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo da’oo godhachuun sadoo dhuunfaa soroobuu bare ammas maqaa “Qeerroo Oromiyaa” jedhuun daldala/seedata dhuunfaa geggeessuuf wawwaataa jiraachuu arguutti jirra. Murni kana dalagu kun warruma kalee “Oromoon bilisomeera, Qabsoon goolabamteetti” jedhee saba afaanfaajjessuun gatii dhiigaafi lafee ilmaan Oromoon injifannoo argamte gara dabarsuun waraabessatti dabarsee kennedha. Haatahuutii nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo gatii kabajamaa hiriyaa hin qabne kana waraabessatti hin laannu jennee rakkoo nutti dhufe mara dandamachuun WBO faana hiriirree diina kokkee qabnee har’a geenyee jirra.
Egaa, Ammas tooftaa fakkaattotaa kana dura ejjennoo guutuun dhaabbachuu waan nu hanqisu hin jiru, Hin jiraatus. Kanaaf, Ummanni keenya martinuu afaanfaajjii fi burjaajii maqaa “Qeerroo Oromiyaa” jedhu kanaaf gurra hin ergisinaa isiniin jenna.
Nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo:
Bilisummaa fi gabrummaan maal akka fakkaatu bareechinee beekna. Haga Bilisummaan Oromoofi Walabummaan Oromiyaa mirkanooftu falmaa hin lakkisnu.
Mootummaa gabroomfataa ammoo nii fincilla malee gaaffii gaafannee deebii nuti irraa eeggannu hin jiru.
Mootummaa Itoophiyaati ka ofiin jedhu paartiin bilxiginnaa abbaa irree waan taheef gaaffii gaafachuunis ta’e karaa nagaa falmuun bishaan moonyeetti naqanii tumuu faana takka jenna. Kanaafis Ummata keenya qabsoo hidhannoo akka jabeessu jabeessinee dhaammanna.
Ummanni keenya bakka jiruu dammaqiinsaan tokkummaa isaa tiksee qaanqee warraaqsaa kallattii maraan qabsiisuuf of qopheessuudha qaba jenna.
Ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baachuun diina tumsaniinis hojiin itti jirtan sirrii miti. Kottaa warraaqsa ummataa jabeessaa, Dadhabdan ammoo diina tumsuu irraa walaba tahaa dhaamsa jedhu dabarsuu feena.
Warraaqsi itti fufa, Sirni nafxanyaa nii kufa.
Caamsaa 23, 2020.